Ny kinova fampandrosoana fahatelo an'ny GIMP 3.0 dia efa navotsotra | Ubunlog
Navoaka ny kinova fampandrosoana fahatelo an'ny GIMP 3.0
Vao nivoaka ny famoahana ny kinova GIMP 2.99.6 vaovao izay mitohy ny fampivoarana ny fiasan'ny sampana GIMP 3.0 miorina amin'ny ho avy.
Ao aminy nifindra tany amin'ny GTK3, nanampy ny fanohanana mahazatra an'i Wayland sy HiDPI, nodiovina be ny base code, API vaovao no natolotra ho an'ny fampandrosoana plugin, nampiharina ny fandefasana cache, nampiana ny fisafidianana ireo sosona marobe (fisafidianana multi-layer), ary nomena ny fanitsiana teo amin'ny habaka am-boalohany.
1 GIMP 2.99.6 Endri-javatra vaovao lehibe
1.1 Ahoana ny fametrahana GIMP amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
GIMP 2.99.6 Endri-javatra vaovao lehibe
Amin'ity kinova fampivoarana vaovao aseho ity dia hitantsika ao amin'ny ampiasain'ny fitaovana fanovana ivelan'ny lamba canvas ny fametrahana torolàlana ivelan'ny lamba canvas, izay mety ho ilaina amin'ny toe-javatra izay tsy ampy ny haben'ny lamba vita amin'ny canvas voalohany. Raha ny fahaizana nomena teo aloha hanesorana ny mpitari-dalana amin'ny alàlan'ny fanesorana azy eo amin'ny lamba, dia niova kely ity fihetsika ity, fa tsy fari-pitsarana hampiantranoana, mba hanesorana azy dia tsy maintsy afindrao ivelan'ny faritra hita maso izao ilay mpitari-dalana.
Ao amin'ny fifampiresahana hametraka ny haben'ny lamba, nanampy fahaizana misafidy modely efa voafaritra izay mamaritra ny habeny mahazatra mifanaraka amin'ny endrika pejy mahazatra (A1, A2, A3, sns). Ny habeny dia refesina arakaraka ny tena habeny, raha raisina ny DPI voafantina. Raha, rehefa manova ny haben'ny lamba dia tsy mitovy ny DPI amin'ny maodely sy ny sary ankehitriny, dia asaina hanova ny DPI amin'ilay sary ianao na handanja ny môdely hifanaraka amin'ny DPI amin'ilay sary.
Niampy fanohanana amin'ny fanitsiana ny lamba canvas amin'ny fihetsika pinch amin'ny touchpads ary efijery mikasika. Ny pinch scaling hatreto dia tsy miasa afa-tsy amin'ny tontolo iainana any Wayland, amin'ny fivoriambe ho an'ny X11 ity fisehoana ity dia hiseho afaka volana vitsivitsy aorian'ny fividianana patch miaraka amin'ny fampiasa ilaina ao amin'ny X Server.
Nanatsara ny fitaovam-pifidianana fandokoana fanandramana mifantina tsikelikely faritra iray misy kapoka borosy. Ny fitaovana dia mifototra amin'ny fampiasana ny algorithm segmentation selective (grafika) hisafidianana ny faritra mahaliana ihany. Ny fifantenana izao dia mandray ny faritra hita maso, ahafahanao manafaingana bebe kokoa ny fandidiana rehefa mizana.
Nanampy plugin iray hiteraka mombamomba ny loko ICC miorina amin'ny metadata gAMA sy cHRM tafiditra ao anaty sary PNG, mamaritra ny fanitsiana gamma sy ny chroma. Io fiasa io dia ahafahanao mijery sy manitsy ny sary PNG omena miaraka amin'ny gAMA sy cHRM ao amin'ny GIMP.
Ny fampiharana isan-karazany ny plugin dia natolotra amin'ny famoronana pikantsary. Manokana, nampiana safidy iray izay mampiasa vavahady Freedesktop mamorona pikantsary amin'ny tontolo iainana any Wayland ary hiasa amin'ny fonosana flatpak izay mampiasa fitokanana fampiharana.
Ao amin'ity plugin ity, ny lozika amin'ny famoronana pikantsary dia afindra amin'ny sisin'ny vavahady, izay mamorona fifanakalozan-kevitra amin'ny masontsivana ny atiny voasambotra, nefa tsy mampiseho ny dinika GIMP taloha.
Amin'ny alàlan'ny default, Misy karazana singa famolavolana omena, satria ny GIMP izao dia manohana ny fifantenana sosona.
Vita ny asa hampitambatra ny anarana fiasan'ny asa, miampy ny fahafaha-mitahiry sy miditra amin'ny angona fanampiny mifamatotra amin'ny sary, sosona na ohatra omena ny GIMP, mamela ny plug-in hitahiry angona binariary tsy mitombina eo amin'ny reboot.
Ny TIFF Export Plugin dia manome fitehirizana sary mombamomba sy fanehoan-kevitra isaky ny sosona ny sary.
Mitohy ny fandaminana ny API ho fampandrosoana plugin.
Andalana kaody vitsivitsy izao no ampy hamoronana fifanakalozan-kevitra GTK.
Ahoana ny fametrahana GIMP amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Gimp Fampiharana tena malaza izany ka hita ao anatin'ny trano fitehirizana izany saika ny fizarana Linux rehetra. Saingy araka ny fantatsika, ny fanavaozana ny fampiharana dia matetika tsy ho ela ao anatin'ny repositories Ubuntu, ka mety maharitra andro izany.
Na dia tsy very aza ny rehetra, nanomboka Mpanamboatra Gimp dia manolotra anay ny fametrahana ny fampiharana avy amin'i Flatpak.
Ny fepetra voalohany apetraka amin'ny Gimp avy amin'ny Flatpak dia ny fanohanan'ny rafitrao azy.
Efa azo antoka ny fametrahana Flatpak napetraka ao amin'ny rafitray, eny tokoa afaka mametraka Gimp isika avy any Flatpak, manao an'io izahay manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Raha vantany vao tafapetraka, raha tsy hitanao ao anaty menio dia azonao atao ny mampandeha azy amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity:
ankehitriny raha efa manana Gimp napetraka amin'ny Flatpak ianao ary te-hanavao ity vaovao ity Malagasy Bible, mila mihazakazaka izao baiko manaraka izao fotsiny izy ireo:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » sary » Navoaka ny kinova fampandrosoana fahatelo an'ny GIMP 3.0
Mampanantena i KDE fa hivoatra be ny fampifanarahan'ny mpampiasa Plasma, ary efa nanamboatra bibikely manelingelina izy ireo